Online Marg | निर्वाचन नजिकिएका बेला महराले पाए नयाँ जिम्मेवारी, पुरै सक्रिय भएपछि एमालेमा तरंग !
निर्वाचन नजिकिएका बेला महराले पाए नयाँ जिम्मेवारी, पुरै सक्रिय भएपछि एमालेमा तरंग !
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका छन् । नेकपा एमाले रोजेका माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरुलाई माओवादीमै फर्काउन प्रचण्डले जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
माओवादीका प्रभावशाली नेताहरु रामबहादुर थापा ,लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी , प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलगायत नेताहरु एमालेमै बसेका थिए । त्यसमध्ये रामबहादुर थापाले एमालेबाटै वागमती प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका नेताहरुले नै साथ छोडेपछि प्रचण्ड उनीहरुलाई माओवादीमा फर्काउने कसरतमा लागेका हुन् । माओवादीबाट प्रभावशाली नेताहरुले नै पार्टी परित्याग गर्ने क्रम सुरु भएपछि नेताहरुलाई पुनः पार्टीमा फर्काउने रणनीतिमा दाहाल लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार महराले माओवादीका पूर्व नेताहरुसंग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । महराले नेताहरुलाई सम्पर्क गरेर पार्टीमा फर्काउने कोशिस गरेको बताइएपनि एमालेमा बसेका नेताहरु भने माओवादीमा नर्फकिने बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमालेतिर लाग्दा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको छ । त्यसपछि उनीहरुले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग राख्दै निर्वाचन आयोग गएका थिए । आयोगले माओवादी वैधानिक रहेकाले खारेज गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Tags :कृष्णबहादुर महरामाओवादी केन्द्र